Ogaden News Agency (ONA) – Zenawi waxa ku kacsan shacabka Ethiopia oo dhan ONLF kaliya Daggaal kuma wado: Daawo 2 Filim-
Zenawi waxa ku kacsan shacabka Ethiopia oo dhan ONLF kaliya Daggaal kuma wado: Daawo 2 Filim-
Al Jazeera ayaa soo bandhigtay dhibatada uu males zenawi ku hayo ee cabudhinta shacabka Ethiopia. halkan hoose waxa aan idiinku soo gudbinayna laba filim.
Midka hore waxa uu ka hadlaya Aljazeera oo wareysi la yeelatay siyasiyiin iyo suxufiyiin Ethopian ah oo kawaramaya dhibatada uu Zenawi ku hayo dadka Ethiopia. Dhibkaas oo isugu jira mid saxafadeed iyo mid cadaadis kaleba leh. Barnaamijkan ayaa looga hadlay kaligii talinimada Males Zenawi iyo maxkamadaha uu u sameystay in dadka lagu xukumo.
“Qofku waxa uu moodi markii la yiraahdo maxkamad ayaa lagu saari in meesha cadaalad ka jirto, Iyada oo wax caddeyn ah lagugu heyn ayuunka kiis lagugu soo oogi dabadeeto waxa uu xaakimku dhaho uunba lagugu xukumi dood iyo su’alo iyo caddeymo midna iyada oo laguu raadin.”
Arrintan ayaa ah mid aad loola dhakafaray, Wadanka Ethiopia ayaa waxa maxkamada sare ay soo saaratay wax la yiraahdo in qofka lagu xukumo innuu yahay argagaxiso.
Waxaa argagaxiso ah qof kasta oo lagu eedeyo innuu kasoo horjeedo taliska Males Zenawi.
qofka hadiiba lagu eedeyo innuu kasoo horjeedo males Zenawi waa danbiile waana argagaxiso cadeymo iyo baadhitaan uma uu baahna. Barnaamijkan hoose ka daawo Aljazeera oo faaqidaad ka bixinaysa arrimo la xidhiidha. Sidoo kale Filimka hoose daawo:
ETHIOPIAN KONY; MELES ZENAWI!
Filimkan sare ayaa waxa uu ka xogwaramaya mudadii uu heystay kaligi taliye Zenawi iyo dhibatada uu u geystay shacabka uu gumeysto. Waxa filimkan ka muuqda shacabka Ogadeniya oo uu xasuuqay, iyo dilal iyo barokicin badan uu ka geystay dhulka sare ee Ethiopia. Waxana shacabka Ethiopia ay bilaabeen kacdoon ay kaga soo horjeedaan kaligi taliye Zenawi. Iyaga oo aalad kasta oo ay ku ridi karaan Zenawi isku dayaya.
Filimkan kore ayaa waxa uu daba socda Olole ay bilaabeen jaaliyadaha Somalida Ogadeniya oo loogumagac daray Zenawi waa Kony kale, waana in maxkamad la horgeeyo. Shacabka Ethiopia waxa ay hadiyo jeer tusaale kasoo qaataan halganka Ogadeniya, waxayna bilaabeen mid siyasadeed iyo mid hubeysan oo ishuwan si ay isaga caabiyaan kaligi Taliye Zenawi oo kasoo jeeda qowmiyada ugu tiro yar islamarkaasna xooga ku heysata wadan ay 80 million ku noolyihiin dad ka badan.
Marka la qiimeyo kacdoonka shacabka Ethiopia waxa lagu qiyasaya in Ethiopia burburkeedi bilowday muddo yar oo ka yar 10 sannona aan Ethiopiada hada jirta aysan jiri doonin.
Ninkii awood iyo tabar isbida uu usoo hadhi doono, Zenawina lahorkeeni doono maxkamadaha Caalamiga ah. Balse eega waxa aad la isuweydinaya cuduro xun oo lashegay in laga helay Zenawi innuusan gaadhi doonin oo laga yaabo in uu u dhinto xanuunkan. Balse Qadarta Ilaahay ayaa haya Haduu noladona waxa uu noqon doona nin lamaxkamadeyo haduu dhintana akhira ayaa hortaagan oo uusan ku fakaneyn.
Shacabka Ogadeniya ayaa waxay ku guuleysteen in kacdoonkoodu abaabulo shacka Ethiopia. Sida filimkan ka muuqata waxa aad ku arkaysan meelo badan ay ku mujinayaan dhibatada Ogadeniya ka jirta iyo sida shacabka Ogadeniya u galgamayo iyaga oo soo saaray haween qoryo watta oo u taagan kacdoonka dhulkooda lagu xoreynayo.